Philippe Coutinho oo dalab xoogan ka helay mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee England – Gool FM
Philippe Coutinho oo dalab xoogan ka helay mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee England
(England) 31 Maajo 2019. Wargeyska “Mitro” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca kal qaaday in xddiga reer Brazil ee iyo kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho la filayo inuu u dhaqaaqo Chelsea suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Philippe Coutinho ayaa ku guuldareystay inuu hantiyo quluubta taageerayaasha kooxda Barcelona iyo saxaafada inta lagu jiray xilli ciyaareedka dhawaan soo idlaaday, kaddib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed xun oo ka dhigtay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu xun ee kooxda, hadii uusan ahayn kan ugu xun.
Laacibka reer Brazil ayaa sidoo kale isbuucyadii lasoo dhaafay la kulmay dhaleeceyno xoogan, gaar ahaan tan iyo markii ay kasoo hareen tartanka Champions League.
Chelsea ayaa sugeysa go’aanka FIFA ee ku aaddan ganaaxa lagu soo rogay ee ku aadan inaysan sameyn karin saxiixa wax ciyaaryahan ah labada suuq ee soo aadan, waxayna rajeenayaan in loo ogolaado sameynta saxiixyo inta lagu gudi jiro suuqa xagaaga, sida ay qortay jariirada The Sun.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in kooxda reer London ee Chelsea ay diyaar la tahay qiimo dhan 140 milyan oo ginni ee u dhiganta (158 milyan euros) si ay ugu qanciso Barcelona inay kasoo qaadato adeega Philippe Coutinho.
Yeelkadeeda, Chelsea ayaa qorsheeneysa in Philippe Coutinho ay ka dhigato badalka Eden Hazard, kaasoo sheegay inuu ka tagayo garoonka Stamford Bridge, waxayna u badan tahay in laacibka reer Belgian uu xiran doono maaliyada cadaanka ah ee Real Madrid.
Tababare Ole Gunnar Solskjær oo iska diiday saxiixa xiddig ka tirsan Tottenham Hotspur